မတ်လ 2017 စာရွက်စာတမ်းဟောင်းများ | WikiWon
Month: မတ်လ 2017
သင့်ခန္ဓာကိုယ်: တစ်ဦးသုက်ပိုး၏ဦးခေါင်းကိုရငျ့ကကျြ Ovum စိမ့်ဝင်သွားတယ်တဲ့အခါမှာဓာတ်မြေသြဇာ Fertilization ဖြစ်ပေါ်. ထိုးဖောက်မှုပြီးနောက်, အဆိုပါအရေးပါ (သောမျိုးဗီဇပစ္စည်းဆံ့) ယင်းသုက်ပိုးနှင့် Ovum ဖျူးနှင့်ပိတ်သုက်ပိုးတစ်စက်၏ကိုယ်နှင့်အမြီး၏. အသစ်မျိုးအောင် Ovum ကယ်လိုရီထို့နောက်အခြားအသုက်ပိုးမှပိတ်ဆီးနေသောကြောင်းတစ်ပြင်အလွှာဖြစ်ပေါ်လာသောတစ် Zygote ဦးဆောင်. က Fallopian tube ကိုနှိမ့်ချဖြတ်သန်းအဖြစ် Zygote ထပ်ခါတလဲလဲဆဲလ်ကွဲပြားခြင်းခြင်းကိုသည်းခံ. အချိန်ကိုကသားအိမ်ရောက်ရှိ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအစိုင်အခဲသို့လာခဲ့သည် ဆက်ဖတ်ရန် [...]
[wordpress_file_upload]Femur The medical name for the thigh bone, which is the longest bone in the body. The lower end of the femur hinges with the tibia to form the knee joint. Te upper end is rounded intoaball that fits exactly intoasocket in the pelvis to form the hip joint. The head of the femur is joined to the bone shaft byanarrow piece of bone called the neck of the femur, which isacommon fracture site. St the lower end, the bone is enlarged to from two lumps that distribute the ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Female An individual with two X sex chromosomes. Females are also characterized by the presence ofavagina and vulva. Female Catheter A short catheter (ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြွန်) that can be inserted intoawoman's bladder through the urethra for the purpose of withdrawing urine. Feminization The developments of female secondary sexual characteristics in the male (such as breast enlargement and fat deposits beneath the skin and loss of facial hair). The condition is due either toahormonal disorder or ဆက်ဖတ်ရန် [...]
သစ်သီးများအဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးသိကောင်းစရာများနှင့် Tricks | အစွမ်းထက်ကျန်းမာဘဝ
mujeer မတ်လ 5, 20170မှတ်ချက်များ
ဟိုင်း! သစ်သီးများသင့်ခန္ဓာကိုယ်များအတွက်အရေးပါဆုံးဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျကနျြးမာရေးလိုအပျပါဒါကြောင့်သင်လည်းသစ်သီးများလိုအပ်သင့်ပါတယ်, သောကွောငျ့အသီးအသီးအပွမှာသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတချို့နာတာရှည်ရောဂါများအန္တရာယ်လျှော့ချနေကြသည်နှင့်တူအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိ. အသီးများကဲ့သို့အများအပြားဗီတာမင်များ; အ apricot အတွက်တစ်ဦးကဗီတာမင် B1 ကိုဗီတာမင် B2 ဗီတာမင် B6 ဟာဗီတာမင် C ကိုဗီတာမင်ရှိပါတယ်. အခု Apple ကတစ်ဗီတာမင် B1 ကိုဗီတာမင် B2 ဗီတာမင် B6 ဟာဗီတာမင် C ကိုဗီတာမင်ရှိပြီးထိုငှက်ပျောအတွက်ဗီတာမင်တစ်ဦးကဗီတာမင် B1 ကိုဗီတာမင် B2 ဗီတာမင် B6 ဟာဗီတာမင် C ကိုရှိပါတယ်. Now What is Vitamin? Any ဆက်ဖတ်ရန် [...]
Folic Acid Also called folate or folacin, ဖောလစ်အက်ဆစ် B-ရှုပ်ထွေးတဲ့ဗီတာမင်တစ်ခုဖြစ်တယ်. ဖောလစ်အက်ဆစ်ဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခွေးဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားကစားကထုတ်လုပ် B မနိုင်, ထိုကွောငျ့, come from food or supplements. The daily requirements of folic acid for both healthy men and women is 200 မိုက်ခရိုဂရမ် (200 မီလီဂရမ်). သို့သော်, လိုအပ်မှုကိုကြိုတင်မှတိုးနှင့်ကိုယ်ဝန်, အကြောင်းကျော်နို့နှင့်လူများအတွက်အခါ, 50 အသက်အနှစ်. ဖောလစ်အက်ဆစ် * DNA ကိုအောင်၌အကြှနျုပျတို့၏မျိုးဗီဇကိုတက်စေသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ) နှင့် RNA (a substance ဆက်ဖတ်ရန် [...]